नाम मात्रै कमाएर हुन्छ बिवाह गरेर सन्तान जन्माउनु पर्दैन, भन्दै गायक राजेश पायल राइकी हजुरआमा – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८ समय: १५:५०:४५
गायक राजेश पायल राईले आफ्नो मामा मावलीलाई स’म्झंदै मावलीघर पुगेका छन् । झण्डै ३० वर्ष उनी मावलीघर गएका हुन् । राजेशले त्याहाँ आफ्ना सबै बाला’पनलाई स्मरण गरेका छन् ।
उनले बालापनमा मामाघरमा दशैंको टिका ल’गाएपछि आफ्ना भाईहरु र आफुले कतिकति पैसा पायौं भनेर घरदेखि पर बारीको छोउमा बसेर पैसा गनेको पनि सम्झिए । मामाघरको आँगनमा उ’भिएर गायक राजेशले आफ्नो बालापनको धेरै कुरा स’म्झिए ।
उनले त्याहाँ क’तिपयि बालापनमा गरेका कुराहरु बि’र्सिए पनि तर उनका मामाहरु र मावलीका दाईहरुले उनलाई ती कुराहरु स्म’रण गराए ।
एकजना मामाले त राजेशले सानैमा मामाघरको छानोमा उभिएर गीत गाएको र त्यसपछि आफुले आफ्नो नाम ‘रापा राई’ राख्ने भनेर आफुलाई सु’नाएपछि राजेशलाई नामको सर्टफम राख्नुभन्दा फुु’लर्फम नै राख्नु भनेर आफुले सुझाव दिएको कु’रापनि स्मरण गराए ।
मामाले भनेको उक्त कुरा सुनेर राजेश एक’छिन् त घोरिएर सोंच्न थाले र पछि हो है मामा भन्दै मुसु’क्क हाँसे । भान्जाले आफुले भनेको कुरा मानेर राजेश पायल राई नै नाम राखेको र उक्त नामबाट नै अहिले राजेशको प’हिचान बनकोमा भान्जाले आफ्नो कुराको मान राखे’कोभन्दै मामापनि नै खुशी भए । उता राजेशलाई उनकी माईजुले बिहे गर्नकोलागी दबा’ब दिईन् ।
माईजुले राजेशलाई भनिन्,‘अब बिहे गर्नु पर्छ । समय घर्कि सक्यो । तिम्रो बिहे खान पाईन्छ कि भ’न्दाभन्दै धेरैजना बिति’सक्नु भयो । अब मेरो पनि पालो आई राखेको छ ।
मलाई बिहे कहिले खुवाउँछौं ?’ माई’जुले राजेशलाई प्रश्न गर्दै भनिन्,‘अब तुरुन्तै बिहे गर है भान्जा । दुई छोरा र दुई छोरी त्योपनि जु’म्ल्याहा जन्मा’उनु पर्छ तिमीले ।’
माईजुको कुरा सुनेर अनि बिहे’कोलागी दबाब दिएको देखेर राजेश पायल छ’क्क परे । उमेरले १०० पुगेकी माईजुले बिहे’कोलागी दबाब दिंदा राजेशले चुप लागेर हस् भन्नु बाहेक अरु उनीसंग कुनै उपायपनि थिएन । जे’होस् उमेर खाएर बसेका राजेशलाई उनका माव’लीले पुग्नेगरी आर्शिबाद दिएका छन् ।
के राजेशको अब बिहे हुन्छ होला त ? के राजेशले जुम्ल्याहा सन्तान नै जन्मा’उँछन् होला त ? यो प्रश्नको जवाफ तब उनका द’र्शकहरुले पाउँनेछन् जब राजेशले बिहे गर्नेछन् । इताजा खबरबाट
बाँकी कुरा भिडियोमा छ ।[[
Last Updated on: January 28th, 2022 at 3:50 pm